ဘာကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ရတာလဲ? – Good Health Journal
ဘာကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ရတာလဲ?
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှုက ဆံပင်ဆုံးရှုံးတာနဲ့ တိုက် ရိုက်ဆက်စပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆံပင်အရောင်ချွတ်တာ၊ အရောင်ဆိုးတာ၊ ကောက်တာ၊ ဖြောင့်တာတွေကို အလွန်အကျွံလုပ်တာကြောင့် ဆံသား ပျက်စီးနိုင်ပါ တယ်။ ဆံပင်ဆက်တာကြောင့်လည်း ဆံပင်ရဲ့ အလေးချိန်ကြောင့် ဆံသားအမြစ်ပျက် စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အဆိပ်ငွေ့တွေက ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ နေရာတကာမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် အဆိပ်ဖြစ်တာက အများဆုံးပါပဲ။ လေထုညစ်ညမ်းမှု ကြောင့် ဆံခြည်မျှင်ပေါက်လေးတွေက ပျက်စီးသွားပြီး ဆံသားကျိုးတာတွေနဲ့ ဆံပင် ပါးတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ မြို့မှာနေထိုင်သူတွေက လေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့၊ ခဲဆိပ်၊ နီကယ်ဆိပ်နဲ့ ဆာလဖာဆိပ်ကြောင့် တောမှာနေထိုင် သူတွေထက် ဆံပင်ကျွတ်မှုပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာ ကွယ်ရေး ဗဟိုရဲ့ အဆိုအရ စီးကရက်မှာ ပါဝင်တဲ့အဆိပ်ငွေ့တွေက အရေပြား၊ လက်သည်း၊ သွားနဲ့ ဆံပင်ပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုများစွာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဆံသားကျန်းမာဖို့အတွက် ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှောင်တာ တွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ သိုင်းရွိုက်နဲ့ Auto Immune ရောဂါတွေကြောင့် လူ ငယ်အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ ဆံပင်အကျွတ်များကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။